किन वर्षौंसम्म रिलिज भएन नीवनको ‘गुडबाई काठमाडौं’ ?
बैतडीमा बँदेलको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु, चार घाइते
घरायसी विवादमा बन्चरो हानेर बुबाले गरे छोराको हत्या
सिरियाको जेलमा आक्रमण, कम्तीमा १२० जनाको मृत्यु
भक्तपुरमा ५ सय १५ सहित काठमाडौं उपत्यकामा थपिए ६ हजार १७२ जना कोरोना संक्रमित
पछिल्लो २४ घन्टामा थप १२ हजार ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
नाडाल अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा
सिटामोल उपलब्ध गराउन सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
You are at:Home»मनोरञ्जन»किन वर्षौंसम्म रिलिज भएन नीवनको ‘गुडबाई काठमाडौं’ ?
By bktnews Posted on	 November 26, 2021 मनोरञ्जन
काठमाडौं । चलचित्र ‘गुडबाई काठमाडौं’ निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसके पनि रिलिज भएको छैन । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेष्टिभलमा प्रदर्शन भए पनि नेपालमा भने यो चलचित्र रिलिज भएको छैन ।
नेपालमा फरक धारको चलचित्र निर्माणको सुरु गर्ने निर्देशकहरु मध्येका एक नवीन सुब्बाले ‘गुडबाई काठमाडौं’ निर्देशन गरेका छन् । त्यसैले उनको यो चलचित्र कस्तो भन्ने धेरैलाई प्रतीक्षा छ । ‘नुमाफुङ’ उनले निर्देशन गरेको चलचित्र हो । यो चलचित्र नेपाली चलचित्रको इतिहासमा नयाँ धारको सिनेमा निर्माणमा कोषेढुङ्गा मानिन्छ ।
चलचित्र केही समय अगाडि नै रिलिज गर्ने तयारी गरिए पनि कोभिडका कारण सम्भव नभएको निर्देशक सुब्बाले बताए । “चलचित्र हामी जब रिलिज गर्ने तयारी गर्यौं, त्यही समय कोभिडका कारण लकडाउन भएपछि त्यो सम्भव भएन,” उनले भने, “अब भने हामी सकेसम्म चाँडै नेपालमा पनि रिलिज गर्ने तयारीमा छौं ।”
धेरै पहिला नै चलचित्र रिलिज गर्ने योजना भए पनि केही व्यक्तिलाई चलचित्र देखाउँदा उनीहरुले दिएको सुझाव अनुसार सच्च्याउँन थाल्दा ढिलो भएको निर्देशक सुब्बाले स्पष्ट पारे ।
“मैले चलचित्र कस्तो छ भनेर फिडब्याक लिन केही साथीहरुलाई चलचित्र देखाएँ । उहाँहरुले चलचित्र त खत्तमै पारेर बिगारेछौ भनेर भने । भिजुअलको काम सुझाव अनुसार सच्च्याउँदा सच्च्याउँदै ढिलो भयो,” उनले भने, “मलाई यो चलचित्रले केही पाठ पनि सिकायो । फिडब्याकका लागि धेरैलाई चलचित्र देखायो भने काम ढिलो हुने रहेछ ।”
यद्यपि, केही इन्टरनेशनल फिल्म फेष्टिभलमा चलचित्रले अवार्ड जितिसकेको उनले बताए । तर, यसको चर्चा भने नेपालमा खासै नभएको उनको भनाइ छ ।
गुडबाई काठमाडौं’ पछि फिचर फिल्म निर्देशन नगरेका उनी अहिले भने ‘गाउँ आएको बाटो’ निर्देशनको अन्तिम तयारीमा छन् । तीन दिन अगाडि निर्माण घोषणा गरिएको चलचित्र केही दिनपछि छायांकन सुरु हुँदैछ ।
प्रकाशित मितिः २०७८ मंसिर १० शुक्रबार
राजकुमार राव र भूमि पेडनेकरको ‘बधाई दो’ फेब्रुअरी ११ मा प्रदर्शन हुने
नयाँ रियालिटी शो ‘सिङ्गर’ घोषणा, विजेतालाई २५ लाख र कार जित्ने अवसर